प्रतिनिधि सभा विघटनः आज को कोले गर्दैछन् बहस ? - Reel Mandu
प्रतिनिधि सभा विघटनः आज को कोले गर्दैछन् बहस ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको आज (बुधबार)देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
सोही इजलासले गत जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै संसद विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाले पनि लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट २–२ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेगरी एमिकसक्युरी मागेको थियो सोही अनुसार दुवैले दुई दुई सहयोगी पठाइसकेका छन्।
असार एक गते इजलासलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्युरी चयन भएका हुन्। नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले दुई र दुई जना जना वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरी चयन गरेको हो। नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकसक्युरीको रुपमा चयन गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा मनोनयन गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका भएका छन्।
असार ३ गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ लामो र पट्यारलाग्ने हुनुका साथै अनावश्यक समय खर्च नहोस् भनेर बहसमा उपस्थित हुने सबै कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीको हकमा पनि समय तोकेको छ।
वुधबार मुद्दामा सुनुवाइको औपचारिक सुरुआत हुनेछ। यसका लागि निवेदकहरुले समय तालिकासहित बहसको व्यवस्थापन गरेका छन्। यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखालाई पनि गराएका छन्।
बुधबारको बहसमा नेपाल बारका पूर्वमहासचिव खम्बबहादुर खातीले सुरुवाती बहस गर्नेछन्। खातीले करिव २० मिनेटमा ओपनिङ बहस गरेपछि गोविन्द बन्दीले बहस गर्नेछन्। बन्दीले करिव ४० मिनेट बहस गर्नेछन्। बन्दीपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको रोलक्रम सुरु हुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधानको पालो आउनेछ। बुधबार शम्भु थापासम्मको बहस सक्ने तयारीमा निवेदकहरु रहेका छन्। थापाले करिव १ घन्टा बहस गर्ने, अरुले ४० मिनेट गर्ने तयारी गरेका छन्।
उनीहरुलाई सर्वोच्चले १५ घन्टाको समय तोकेकाले त्यही अनुसार समय व्यवस्थापन गरेर तीन दिनमा बहस सक्ने तयारीमा निवेदकहरु छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुपछि अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, भिमार्जुन आचार्य, सुनिलकुमार पोखरेल, दिनमणी पोखरेल लगायतले पनि बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
ओलीका तर्फवाट यसपटक पनि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले लिड गर्ने वुझिएको छ। उनीसँगै ईश्वरी भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण अर्याल, महेश नेपाल लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
सरकार पक्षको तर्फवाट बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा चार नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन्। नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टेकप्रसाद घिमिरे र श्यामप्रसाद भट्टराईले बहस गर्नेछन्। त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र अन्य केही सहन्यायाधिवक्ताहरुले बहस गर्ने छन्। उनीहरुको बहसपछि एमिकस क्युरीलाई इजलासले समय दिनेछ।
सर्वोच्च बारवाट २ र नेपाल बारवाट तीन जना एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा राख्ने छन्।